‘मलाई अपुग के नै थियो र, तर, आफनै देशमा केही गर्न स्वदेश फर्किए,’ युवा व्यवसायी घिमिरे « Kathmandu Television HD
२४ वर्षे उमेर साँचो भन्दा जागिर खोज्दै हिँड्ने उमेर । हो, यही उमेरका सुगम घिमिरेको मातहतमा २ सय ५० कर्मचारी प्रत्यक्ष छन् । उनी आबद्ध एसजी ग्रुपमा १ हजार भन्दा बढी । त्यसै ग्रुप अन्तर्गत धेरै उद्योगहरू सञ्चालित छन् । धेरै उद्योग सञ्चालनको प्रक्रियामा छन् ।
एभरेस्ट ग्यास, सुगम ग्यास, पेट्रोल पम्प र मोटर हेड बाइक उनका चलेका व्यवसाय हुन् । नेपाल ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरेका छोरा सुगम सानो छँदादेखि व्यवसायमा चासो दिने, हिसाब हेर्ने गर्थे । त्यस बेला कुनै प्रत्यक्ष भूमिका भने थिएन । तर, व्यवसायिक चासो भने निकै थियो ।
‘ प्लस टु ’ सकेपछि थप अध्ययनका लागि लागे अमेरिकातिर । अमेरिकाको अध्ययन, त्यही काम गर्दै पढ्दै गरेका उनी केही वर्षअघि मात्र छुट्टीमा नेपाल आएका थिए । यसै क्रममा उनले नेपालमै व्यवसाय गर्ने सोच अघि बढाए । नेपाल फर्केपछि उनले व्यवसायमा हात हाले । उनलाई रोजगारी मुलक व्यवसाय गर्ने मन थियो । सुगमको सोच विदेशमा गर्ने मेहनत नेपालमै गरे राम्रो भन्ने थियो । सुरुमा मोटर हेड बाइकमा उनी संलग्न रहे ।
सुगम पारिवारीक व्यवसाय बाहेक कृषी, आइटी लगायत नयाँ व्यवसायका लागि पनि योजना बनाउँदै छन् । त्यसो त, नेपाल फर्केपछि उनलाई केही नपुगे जस्तो भएको थियो । केही नमिलेको जस्तो । सरकारको थुप्रै नीति उनलाई अव्यवहारिक पनि लाग्छ । कर नीतिहरू लगायत केही नियमले व्यवसाय गर्न उनलाई केही असहज लागेको हो । तर, एउटा कुरा के साँचो हो भने अमेरिकामा रहँदा उनी दोस्रो दर्जाको नागरिक थिए भने अहिले पहिलो दर्जाका । आफ्नै देशमा सानै भएपनि पहिचान पनि बनेको छ ।
विदेशमा व्यवसाय गर्न यतिधेरै व्यवसाय मैत्री कानुन छ, आफनु देशमा भने पाइलै पिच्छे समस्या । कहिले काही त दिक्क पनि लाग्छ रे सुगमलाई । सुगम भन्छन, देश बनाउने हो भने, नीति तत्काल सच्चाउ । मुलुकले काँचुली फेर्न नत्र गाह्रो छ ।
ग्यास व्यवसायदेखि हाइड्रोपावर, सिमेन्ट र सञ्चार सबैको संलग्न छन उनी । सफलता कसरी ? यसको जवाफ उनीसँग प्रस्ट छ,“टिम वर्क ” । ६० कम्पनी नै सञ्चालन गर्दा उनले दक्ष व्यक्तिको टिम बनाएर जिम्मेवारी सुम्पने गरेका छन् ।
यसो त बजारमा आउने तयारीमा रहेको गरुड सिमेन्ट, अर्थोडक्स चियाको रूपमा सगरमाथा चिया लगायत थुप्रै क्षेत्रमा त्यत्तिकै चासो र संलग्न रहेका उनको नजरमा सबैभन्दा राम्रो नाफा रहेको क्षेत्र भने हाइड्रो व्यवसाय नै हो । उनी भन्छन, पर्यटनमा नै हो नेपालले गर्न सक्ने त्यसका लागि राज्यको नीति नै हुनुपर्छ ।
जीवन प्रतिको उनको एउटा बुझाइ प्रस्ट रह्यो । कुनै पनि काम सुरु गदा हतार गर्नु हुँदैन । अनि नेपालका थुप्रै युवालाई उनको सुझाव छ । विदेश जानै पर्छ भन्ने छैन । सम्भव भएसम्म नेपालमै विकल्प किन नखोज्ने ? उनी आफ्नै अनुभव सुनाउँदै भन्छन्,“अमेरिकामा केही सिके र अनुभव गरे । अब नेपालमै प्रयोग किन नगर्ने ? ”अहिलेका विकसित देश पनि त्यसै गरी बनेका हुन् ।
आफू भन्दा धेरै पाका उमेरकासँग काम गर्ने गरेका छन्, उनले काममा कहिल्यै मालिकको व्यवहार गर्दैनन् । ६० काटेका कर्मचारीसँग पनि सुगम काम गर्दैछन् । उनी भन्छन् , मालिक होइन उनीहरुको अनुभव लिएर म काम गर्दछु । कार्यालयलाई पारिवारीक माहोल बनाउनु पर्छ ।
उनले अमेरिकामा रहँदा नै कामदारको भूमिका बुझे । जहाँ उनी कामदारकै रूपमा रहेका थिए । पिज्जा डेलिभरी गर्ने काममा उनीसँग दैनिक १७ या १८ किलोमिटरसम्म हिँडेर डेलिभरी गरेको अनुभव पनि छ । कहिले काही त नेपालको व्यापार व्यवसाय याद त आउथ्यो नी । अभावको अनुभव लिएको हुँ । अमेरिकामा कामको सम्मान छ, त्यसकारण आज उनीहरु निकै माथि छन् ।
यता, बुवाको विगतको दुःख हामीले संझेर काम गर्दैछौ, त्यसले थप जोश, जागर, धैर्य बन्न सिकाउँछ । सुगम भन्छन, महिले विदेशमा सवै काम गरे, आज नेपालमा केही काम गर्न मलाई त्यति गाह्रो लाग्दैन् । विदेशको कामले पाठ राम्रै सिकाउँदो रहेछ । सुगम थप्छन, उतै पनि व्यवसाय गर्न सकिन्थ्यो ।
तर, मलाई नेपालमै नाम दाम कमाउने इच्छा पहिलेदेखि नै थियो । त्यो दैनिक त्यागेर स्वदेश फर्किए । युवापुस्तालाई सुगमको सुझाव छ, केही न केही पेशा गर्नैपर्छ । त्यसले अभाव, संर्घष अनि सुख, दुःख सवै देखाउँछ । सिप, जोश, जागर भएका युवालाई राज्यले पनि हेर्नुपर्छ । रोजगारी, व्यवसाय भयो भने कर त उठि हाल्छ नी, उनको वुझाई ।
बुवा शिव प्रसाद घिमिरेको नेपाली पेट्रोलियम उद्योगमा आफ्नो भिन्न पहिचान छ । त्यसै पहिचानलाई पछ्याउँदै सुगमका दाजु सुदिप घिमिरे पनि व्यवसायिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि संलग्न छन् । इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य सुदिप सुनसरी युवा उद्यमी संघका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्झँदै सुगम भन्छन्, आवश्यक पर्दा दाजुको बुवाको सल्लाह लिने गर्दछु । उनी भन्छन्, ‘ बुवाले आफ्नै दमले व्यवसाय सुरु गर्नु भयो । यसलाई हामीले बिस्तारै अगाडी बढाउँदै लगेका छौ । अनि हामी विस्तार गर्ने कोशिस गर्दैछौ ।
थुप्रै उद्योगी व्यवसायीका छोराछोरी कुलतमा लागेका पनि दृष्टान्त छ यहाँ । तर, सुगम भन्छन, यो समय संर्घषको समय हो । एक पटकको जीन्दगीमा केही न केही पहिचान बनाउनै पर्छ, यो अझ युवा पुस्ताले मनन गर्नैपर्छ । डिस्को बार सुगमलाई पनि पक्कै रहर त होला, उनी जस्तै थुप्रै युवापुस्ता त्यस्तै लतमा पनि छन् । तर, उनको लत त्यो हो होइन, मात्र कडा हार्ड वर्क ।
अविवाहित सुगमका रुचि सङ्गीत र भ्रमण पनि हुन् । विद्यालय जीवनमा पौडी र बक्सिङ खेलमा पनि सक्रिय थिए उनी । नेपालका थुप्रै सामाजिक गतिविधि बुझ्नका लागि उनको उमेर पर्याप्त त हैन । तर, धेरै कुरा थाहा पाएका छन् । आफू सम्भ्रान्त परिवारको भएर सहज ढङ्गले शिक्षा पाउँदा सामान्य शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुने नेपाली समुदायको बारे पनि उनलाई थाहा नभएको होइन । ‘ यो पुरै हटाउने राज्यको काम हो । हाम्रो मन त दुख्छ । तर, हामीले गरेर मात्र हुँदैन । हामीले आफ्नो ठाउँबाट सकेजति गरेका छौ । ’
आफूहरूले सञ्चालन गरेको धादिङको धनु बेसी स्कुलमा असहायलाई पूर्ण छात्रवृत्ति पनि दिइएको छ । सामाजिक रूपमा एउटा टिम बनाएर धेरै असहायलाई सहयोग गर्ने सोच त छदैछ, यस बाहेक उनको समुह एसजी ग्रुपले नियमित रूपमा वृक्षारोपण गर्ने, मन्दिर निर्माण गर्ने लगायतको अन्य सामाजिक काम गरिरहेको छ ।
धेरै नेपाली बिदेसिएका छन् । आफ्नो बाध्यता भएर गएका छन् । तर, उनको एउटा सोच भने प्रस्ट छ । केही आर्थिक श्रोत र अनुभव जुटे पछि नेपाल आएर नै किन नगर्ने ? यस कुरामा उनी प्रस्ट छन् ।
नेपाली राजनीतिको बारे उनको आफ्नै कथन छ । लामो समय पछि स्थायित्व देखिएको छ । तैपनि, केही नीतिगत समस्या सुध्रिए राम्रो हुने उनको विचार छ । यस कारण राज्यले यस कुरामा सुधार गरेर युवालाई व्यवसाय मात्र होइन सामाजिक र राजनीतिक नेतृत्वमा अवसर दिए उपयुक्त हुने उनको मत छ ।
राजनीति पनि वितृष्णाको मुलकारण युवापुस्ता अवसरबाट बञ्चित हुनु हो । युवा छिनभरमा एक ल्किकमा विश्व देख्छन अनि त्यस्तै खोज्छन । त्यो पाउँदैनन फलस्वरुप निरास हुन्छन् । त्यो नेतृत्वमा बस्ने नेताले अब वुझनै पर्छ ।